मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार स्वास्थ्यकस्तो अवस्थामा गम्भीर बनाउँछ कोरोना भाइरसले ?
विराटनगर, ११ मंसिर । कोभिड १९ का कारण देखिने लक्षणको गम्भीरता एकदम कमदेखि अत्यधिक गम्भीरसम्म देखिन सक्छ । केही मानिसमा संक्रमण भए पनि कुनै पनि लक्षण देखिँदैन । केही संक्रमितमा भने सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो तथा फ्लुका जस्तो लक्षण देखा पर्छ ।
लक्षण सुरु भएको एक हप्तापछि संक्रमितमा सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीरमा अक्सिजनको कमी हुने, निमोनिया भई अस्पताल भर्ना हुनुपर्नेसमेत हुन सक्छ ।
वृद्ध उमेर भएका कोभिडको संक्रमण भएर गम्भीर हुने उच्च जोखिम हुन्छ र जोखिम उमेरसँगै बढ्दै जान्छ । शरीरमा पहिलादेखि नै कुनै स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण गम्भीर हुने उच्च जोखिम हुन्छ ।
विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. सन्जीव यादव अवस्था गम्भीर हुनुको कारण कोरोना संक्रमण रोकथामको विषयमा ज्ञानको अभाव, संक्रमण हुनुअघि र भइसकेपछि पनि गरिएको लापरवाही रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार गरिबी, सामाजिक आर्थिक स्थितिका कारण पनि मानिसमा गम्भीर अवस्था देखा पर्छ ।
हृदय रोग, मधुमेह, क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विभिन्न रोग तथा पहिलादेखि नै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिमा गम्भीर कोरोना संक्रमण हुने जोखिम रहन्छ ।
रोगको उपचार गराइरहेका व्यक्तिमा पनि संक्रमण गम्भीर हुने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
एक सय कोभिड संक्रमितमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत संक्रमित गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्छन् । त्यसमध्ये पनि ५ प्रतिशत संक्रमित भेन्टिलेटर नै चाहिन सक्छ ।
हल्का संक्रमण देखिएका संक्रमितलाई निको हुनका लागि कम्तिमा दुई हप्ता र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितलाई निको हुनका लागि तीनदेखि छ हप्ता वा सोभन्दा धेरै समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।
कोभिडको संक्रमण भएपछि कति दिनपछि र कसलाई संक्रमण गम्भीर हुन सक्छ भनेर तोकेर भन्न सकिँदैन । विशेषगरी मधुमेह रोगी, दम, पुरानो क्षयरोगी, दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, इम्युनिटी वुस्ट गर्नका लागि स्टेरोइडको प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिमा गम्भीर अवस्था आउन सक्ने न्यूरो कार्डियो एन्ड मल्टी स्पेसालिटी हस्पिटलका मेडिकल अफिसर तथा जनरल फिजिसियन डा. साहिल अन्सारी बताउँछन् ।
कुनै रोगको उपचार गराइरहेका व्यक्ति तथा कोभिडका कारण निमोनिया भएका व्यक्ति गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढी हुने उनको भनाइ छ ।
कोभिडका कारण हुने निमोनिया अन्य कारणले हुने निमोनियाको तुलनामा छिटो गतिमा फैलन्छ । कोभिडको उपचारका लागि कुनै औषधि उपचार विधि पनि तयार भएको छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा एकदमै छिटो गतिमा फोक्सोमा असर पुर्‍याउने गरी निमोनिया हुने गर्छ । जसले गर्दा श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, छाती दुख्ने, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने जस्ता लक्षण देखा पर्ने गर्छ ।
कहिले काहीँ कुनै कोभिड बिरामीमा सास फेर्ने समस्या नभए पनि अक्सिजनको स्तर नाप्दा शरीरलाई चाहिनेभन्दा कम मात्रा देखिन्छ । संक्रमितले आफूमा देखेको लक्षण सामान्य मात्र हो, यसले केही हानी हुँदैन भनी सोचेर लापरवाही गर्दै जथाभावी औषधिको सेवन गरे गम्भीर हुने सम्भावना धेरै हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
घुम्रपान, मदिरापान, सरसफाइमा ध्यान नदिएमा पनि थप गम्भीर बनाउन सक्छ ।
संक्रमणले गर्दा श्वासप्रश्वासमा समस्या आएर मस्तिष्क तथा अन्य अंगमा अक्सिजनको कमी हुन जान्छ । निमोनिया बिग्रँदै जाँदा फोक्सोमा पानी जम्ने, पिप जम्ने र संक्रमण रगतमा सरेर शरीरका विभिन्न अंगहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।
बिस्तारै शरीरका अंगहरूले काम गर्न बन्द गर्छ र समयमा उपचार नपाएमा कोभिड संक्रमणको कारण मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
कोभिडका लक्षण देखापरेमा डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्क रहेर सल्लाह सुझाव लिन आवश्यक हुन्छ । साथै, शरीरमा कुनै अन्य पुराना रोग भएमा उक्त रोगका बारेमा पनि डाक्टरलाई सुरुमै बताउनु पर्ने हुन्छ ।